China YF-H-904 White akụkụ anọ Nchekwa Coffee Isiokwu + TV guzoro Manufacturer na Supplier | Yifan
YF-H-904 White Rectangular Nchekwa Coffee Isiokwu + TV guzoro
Oge Okomoko nke Oge a: Ọcha mara mma na ọla edo na-egbukepụ egbukepụ na-agbakwunye mmetụ na-enwu gbaa na ohere ọ bụla, ezigbo maka iji ya mechie ụdị ejiji ọgbara ọhụrụ. amamiihe na-acha ọcha gloss imecha.
Atụmatụ Drawers Soro, igwe anaghị agba nchara, Mkpụrụ Obi Glass
YLỌ Oge a & Oge a
IHE: High gloss MDF osisi + Gold plating igwe anaghị agba nchara skwụ
Isiokwu oge 1800mmW * 400mmD * 420mmH
Ngosiputa & Nchekwa: Okpokoro tebụl na-enye gị ohere ịme ihe ọkpụkpọ DVD gị na ihe osise, ebe ihe omimi atọ dị omimi na-enye ntụpọ iji mee ka nsogbu na njedebe site na anya. Angular ụkwụ ya agwụla na a ìhè egbe egbe isi awọ nke na-eweta ọdịnala na oge a ọnụ maka nkecha anya.
Ọchịchị nke oge a. Nkecha na vasatail - okpokoro kọfị a na-emetụta ọgbara ọhụrụ ya na ọmarịcha mma ya. Dị na nha ndị ọzọ na agba.
Ngwakọta TV TV a na-enye ihe niile ịchọrọ maka nchekwa na mgbasa ozi. A dị ọcha-ebipụ na ọtọ imewe, na-eji amamihe mee nchekwa na-gị niile media mmiri, DVD, egwuregwu na remotes neatly zoro ezo.
Nhazi nke Ogologo: E wuru ya nke ukwuu site na iko dị nchara, igwe anaghị agba nchara na osisi siri ike, mpempe akwụkwọ a ga-enye gị ịma mma na-adịte aka.
IHE: ihe: etiti: igwe anaghị agba nchara electroplated ọlaedo agba, n'elu: MDF, mirror iko ọlaedo acha, nnyefe: kụrụ aka down.High mma laminated osisi (eguzogide mmebi na ọkọ, mmiri na elu okpomọkụ)
Biko mara na ọ bụrụ na itinye desktọọpụ desktọọpụ, ihe nkwụnye TV a kwesịrị ịwụnye ogwe nkwado (gụnyere).
Mejupụta ebe obibi gị site na iji ejiji mara mma na ịrụ ọrụ na TV a dị ịrịba ama!
Nke gara aga: YF-H-903 multifunction cofee table + dinging table
Osote: YF-H-905 TV guzoro na Drawers & Doors na Gold